Xagjir Ahaan Dib u Qaybinta Gargaarka Is-kaashatada - Gargaarka Musiibada ee Is-kaashatada ah
Bogga ugu weyn/updates/Si ku-meel-gaadh ah Dib-ugu-qaybin ku-Meelgaar ah
Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, laga bilaabo masiibada oo ku fidday fallaagada hadda jirta, waxaa jiray ubax qurux badan oo iskaashi ah. Mashaariicdaasi waxay ka soo baxeen abuur ka yimid daryeelka wadareed ee hore u jiray. Runtii, "kaalmaynta labada dhinac" kuma ay soo saarin khidmadaha xag-jirnimada ee xag-jirnimada ah, xitaa haddii halyeeyga cirfiidka Peter Kropotkin uu magacan ugu magac daray buuggiisa 'Mutual Aid: A Factor of Evolution'. Waxay ahayd dhaqan soo jireen ah oo socdey qarniyo badan, maxaa yeelay isugeyn, tusaale ahaan, shaqooyin iskaashi iskaa ah, taasoo runtii ahayd ujeeddada Kropotkin. Gargaarka isweydaarsiga, runti, wuxuu noo oggolaanayaa inaan midkeen kasta siino nolol - ma ahan oo keliya inaan noolaado, laakiin si gaar ah, inaan ku barwaaqaysanno - iyo waliba qaababka xun ee rabshadaha iyo dhimashada oo hadda si xoog leh loogu loolamayo.
Si la yaab leh, waxaan ugu mahadcelineynaa iska caabbinta dabka kulul ee kadhaceysa wadooyinka goor dambe, waxaan aragnaa dunidii hore inay bilaabeyso inay si dhaqso ah u burburaan inta qofkeenna aan qiyaasi karno. Qashinka burburka iyo baabuurta gubanaysa, dadku waxay adeegsanayaan qaabab male-awaal ah oo ah kaalmo isweydaarsi si ay isula daryeelaan siyaabo kala duwan iyo weliba qiyaas aan la qiyaasi karin dhowr bilood ka hor. Mana aha oo keliya magaalooyin waawayn, oo hore u ahaa xag-jir. Kacaankan iyo gargaarka iskaashiga ah ee ka soo kordha hareeraha ayaa ka dhacaya meel kasta, bartamaha oo ku taal magaalooyinka yaryar, tuulooyinka ku dhow iyo tuulooyinka, iyo baadiyaha iyo gobollada, halkaasna sidoo kale, gargaarka labada dhinac waa furaha.
Hadana dhammaan boosasku ma wada siman yihiin. Dhowr Magaalo iyo Bulsho oo ka tirsan Turtle Island - ha, dheh, maxaa yeelay waxay udub dhexaad u yihiin kacdoonka, waxay ku sugan yihiin iftiinka warbaahinta, ama horeyba waxay u lahaayeen kaabayaal xag-jir badan - waxay leeyihiin dad aad u tiro badan oo awood, agab, iyo lacag ah . Kuwa kale wax yar ayey u yihiin
Nasiib wanaagse, qayb ka mid ah quruxda kaalmaynta labada dhinac waa qaab dhismeedkeeda rhazomatic, oo u oggolaanaya inuu si joogto ah iyo si dadbanba u kobco si loo taageero suurtagalnimada joogtada ah ee midnimada bulshada, sharafta, iyo xorriyadda. Waxaan kor u qaadi karnaa caqligeenna heer-hoose iyadoo aan noqonayno isku-xirnaan, iskaashi badan — iskuxirida iyo wadaagida masaafo dheer.
Waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino dhammaan meelaha iskood isku abaabulay, mashaariicda, halganka bulshada, iyo dhaqdhaqaaqyada in si xagjirnimo ah dib loogu qaybiyo wadajirka badan ee gargaarka wadaagga ah ee ka baxsan juqraafi ahaan isla markaasna aan sidoo kale kobcinno xiriiro adag iyo xitaa xirnika jacaylka waqtigan ballanta badan. Ma haysataa wax ka badan inta aad weligaa ku riyoonaysay, tusaale ahaan, agabyada daawada iyo lacagaha damiinashada, inaad laba tusaale oo keliya qaadatid? Sidee ku saabsan helitaanka bulshooyinka ku nool gobolkaaga ama deegaanka dabiiciga ah ee aan haysan hal ama labadaba, oo iyaga qaarkoodna wax isaga u siiya? Ma waxaad ku sugan tahay magaalo yar oo u baahan sahay caafimaad iyo lacag damiin, welina qof ka baxsan bulshadaada ayaa taas og arrintaas? Sidee ugufiican ee aad 'uga taxadari kartaa, u daryeeli kartaa' hab aan ku istaagin “xuduudaha” magaaladaaga weyn?
Dhinaceenna, Mutual Aid Musiibo Relief (MADR) waxay ku faraxsan tahay inay isku xiraan folx iyo gargaarka labada dhinac markasta oo ay suurogal tahay. Haddii aad qayb ka tahay dadaal yar oo deg deg ah oo gargaarka degdegga ah oo ay dhibaato ka haysato sidii loo dabooli lahaa baahiyaha nolosha ee bulshadaada, fadlan nagala soo xiriir gurmad iyo taageero [emailka waa la ilaaliyay]
Marka aynu midba midka kale u sii jeedsanno, aad iyo aad u ballaaran, oo aan u weydiino, "Maxaad jeclaan laheyd inaad heshaan?" "Maxaan ku siin karaa?" (ama, "Waa tan waxa aan ku deeqi kara!"), iyo "Sidee ayaan si fiican ugu heli karnaa oo aan isweydaarsan karnaa, saaxiib?"